Izindawo Eziphezulu Eziyi-10 ZaseTurkey - Amakhodi Ebhonasi Yekhasino aku-inthanethi
Izindawo ze-Casino eziphezulu ze-10 Turkey
(233 amavoti, isilinganiso: 4.98 out of 5)
Iyalayisha ... Amakhasino aku-inthanethi asemthethweni aseTurkey awekho ngaphakathi kwesizwe saseTurkey, yize abameli bezokugembula benethemba lokuthi ngolunye usuku bazobona uhlu oluphelele lwezinketho zokugembula zabantu abavela eFederal Republic of Turkey. Ngenxa yokwakheka kombuso, iTurkey iyefana ne-United States ngendlela imithetho engafani ngayo esizweni sonke-yize-ke sibonga ukuthi iTurkey ingumsebenzi nje wokuhlanganisa izinto njenge-US.
I-Turkey yakhiwe yi-16 federal states, manje enezinhlobo ezimbili zomthetho ezihlukene zokubheja ukugembula.
Uhlu lwezindawo eziphezulu ze-10 Turkish Online ze-Casino Sites
Imithetho Yezokugembula yase-Turkish
IPhalamende laseSchleswig-Holstein lidlulise uMthetho weGaming Reform (i-GRA) ngo-Septhemba ka-2011, evumela amakhasino e-intanethi namakamelo okudlala (kanye namabhuku ezemidlalo) ukuba afake isicelo selayisensi yokudlala imidlalo yengozi ku-intanethi esimweni sabo, uma nje bekhokha imali ye-20% yemali engenayo ephelele yelungelo lelo. Phakathi naleso sikhathi, enye i-15 Turkish Lander (ithi) ngo-Okthoba 2011 yadlulisa isivumelwano se-Interstate ekuGemeni (IGT), okwenza izincwadi zezemidlalo ze-20 zithole amalayisense, kodwa azivumelanga amakaninini noma amakamelo amakamelo. Kulesi simo, imali izoba yi-5% yenzuzo. Lokhu kubangela isimo lapho i-Lander yaseTurkey cishe izokwephula umthetho we-EU, oqinisekisa ukuthi iziphathimandla zendawo azikwazi ukukhawulela imithetho engaphansi kweminye imisebenzi esebenza kwenye ingxenye yezwe labo. I-European Union Commission ikhathazekile ngesandulela.
Imithetho yokugembula yaseTurkey kade yaba yinkimbinkimbi, ukusho okuncane, ngoba abagembuli bavunyelwe ukubhalisa emakamelweni e-poker aku-inthanethi nakumakhasino aku-inthanethi, kepha lo mkhuba uqobo awukho emthethweni. Ngakho-ke, lapho isakhamuzi saseTurkey uPius Heinz ewina i-World Series of Poker Main Event ka-2011 futhi eba ngusaziwayo waseTurkey, wabungazwa ngomsebenzi owawungekho emthethweni ngaphakathi kwe-Deutschland. Egcizelela le dichotomy, umpetha womhlaba wonke we-poker oneminyaka engu-22 uthe uzothuthukisa amakhono akhe njengabadlali be-poker online.
Izindawo ze-Casino zase-Turkish Online
Vele, uPius Heinz wayengadlali kunoma yimaphi amakamelo e-poker ayesuselwa enhlabathini yaseTurkey. Kungashiwo okufanayo ngamakhasino aku-inthanethi nezincwadi zezemidlalo lapho amaTurkey abeka khona ukubheja kulezi zinsuku. Wonke lawa masayithi angaphandle ngokwemvelo, imvamisa amawebhusayithi avela e-United Kingdom. Mhlawumbe ngemithetho yokugembula eku-inthanethi yaseTurkey yango-2011, sishukumisela isinyathelo esisodwa eduze kosuku lapho abagembuli bekhasino abangokoqobo baseTurkey bezokwazi ukudlala ezindaweni zomdabu. Uma kungenjalo, mhlawumbe bazokwazi ukudlala ngokusemthethweni kumawebhusayithi asemthethweni anamalayisense aphesheya.
Ngakho-ke, kumdlalo wethebula wekhasino wesilinganiso kangcono kusuka eTurkey, okufunayo yizindawo ezinikezela nge-Turkish e-wallets noma izinsizakalo zokukhokha, i-Euro njengendlela yokukhokha imali, ne-Turkey njengelwimi olusekelwe. Ngenhlanhla, eziningi zegama le-website ye-Yurophu zinakekela izidingo zezikhulumi zaseTurkey yonke indawo.
I-Sofortuberweisung Online Casino
Uma ufuna ukusebenzisa i-Sofort Payment Network noma i- “Sofortuberweisung” service wallet web out of Gauting, Turkey, kufanele usebenzise amakhasino alandelayo: 888 Casino, William Hill Casino, Betway Mobile Casino, 21Nova, Eurogrand noma All Slots Casino. Insizakalo ye-ewallet kaSofort ikhokha ngaphezulu kwezakhiwo ezingama-400 ezahlukahlukene, kepha lezi yizona zinqumo eziphezulu okwamanje. IGiropay enye insizakalo yokukhokha yamaTurkey ane-akhawunti yasebhange, ngakho-ke cabanga ngamakhasino kaGiropay lapho sekuyisikhathi sokuthola ikhasino ye-Deutsch online.
Enye insiza ye-wallet yewebhu yezikhulumi zaseTurkey ezivela e-Austria okufanele ziyicabangele yi-eKonto. Ngenkathi iKonto ihlala ngaphandle kweCzech Republic, iprosesa lokukhokha yiRaiffeisen International Bank-Holding AG yaseVienna, e-Austria. I-RBI icubungula izinkokhelo ze-eKonto lapho abantu befaka imali kwi-888Casino, eWilliam Hill Casino, eBetway, e-Expekt Casino, e-Casino, e-AllSlots Casino nase-Winner Casino. Eqinisweni, i-e-Konto ingasetshenziselwa izingosi zokugembula ezahlukahlukene ze-96, enikeza abagembuli inala yezinketho zokudlala.
Click2Pay Turkish Indlela Yokufaka Idiphozi Ku-Deutsch Casino Online
Abantu baseTurkey abafuna ukusebenzisa uhlelo lokukhokha online lwe-CLICK2Pay olususelwa eMunich baneziza ezingama-888 ezahlukahlukene abangakhetha kuzo. Amanani amaningi alawa azoba ngamahholo ebhingo, izincwadi zezemidlalo, namakamelo e-poker (njengePhathi Poker kanye nePokerstars), kepha ngaphezu kwengxenye eyodwa kwezintathu zazo zingamakhasino aku-inthanethi. Nakulokhu futhi, iClick2Pay GmbH iyindlela eyamukelekile yokukhokha eWilliam Hill Casino, Spin Palace Casino, Roxy Palace, Betway Mobile Casino, 32Red Online Casino naseDream Vegas. Abagembuli baseTurkey kungenzeka baqala ukubona iphethini eyakhiwa ngamakhasino egama lomkhiqizo ahlukahlukene- bathambekele ekubeni nezinketho eziningi zokukhokha. Noma kunjalo, uma uthatha isinqumo sokuthi awufuni ukusebenzisa iWilliam Hills nokubheja365 kwezwe lokudlala etafuleni lekhasino, i-Click2Pay ikunikeza ezinye izinketho eziningi.
ClickandBuy LLC Izibopho zesiTurkey
I-ClickandBuy olunye uhlelo oludumile lokukhokha nokukhokha lwe-elekthronikhi engiye ngiluhlanganise ne-Click2Pay engqondweni yami, kepha i-Click & Buy nakanjani iyinhlangano yayo yezezimali. I-ClickandBuy yasungulwa nguNorbert Stangl ngo-1999 ngenkathi isaziwa njenge-FIRSTGATE Internet AG. Ibhizinisi laliseCologne, eTurkey lapho lisungulwa ehlobo lika-2000, kepha selivele lahambisa indlunkulu kohlangothi oluphephile (ngokusemthethweni) lwaseLondon, eNgilandi. Imithetho yokugembula yaseTurkey yenze ubunikazi bukaClickandBuy baba novalo ngokwanele ukuphuma ezweni, kepha abaningi abagembuli baseTurkey basakujabulela ukusebenzisa le nsizakalo edumile futhi esabalele. I-ClickandBuy isetshenziswa ngabathengisi abangaphezu kwe-7,000 emhlabeni jikelele, kufaka phakathi amasayithi wokugembula aku-inthanethi angama-773, namasayithi emidlalo angu-683 asekela isiNgisi njengolimi. Lawa masayithi afaka iRoyal Vegas Online Casino, iLadbrokes, iWorld Series yePoker Casino, i-PKR Casino, i-Dream Vegas, iPlanet Win 365, iTitanbet, i-32red Online Casino, iRoxy Palace, kanye no (noWilliam Hill no-888casino.
Abadlali abaningi baseTurkey basebenzisa iNeteller neMoneybookers, eseyizinsizakalo ezimbili ezikhona kuyo yonke indawo yesikhwama semali emhlabeni. UNeteller uyaqhubeka nokucubungula izinkokhelo zamazwe amaningi ngaphandle kwase-United States, kuyilapho iMoneybookers ibonakala ikhula unyaka nonyaka odlulayo. Lapha onyakeni olandelayo noma emibili, cishe uzoqala ukuzwa okuningi nge- “Skrill”, okuyigama lomkhiqizo elisha leMoneybookers. Ngesinye isikhathi, iSkrill kuzoba igama elizenzakalelayo leMoneybookers, mhlawumbe lapho ukugembula ku-inthanethi kusetshenzwa kabanzi ngakuthepha elilodwa lokuthinta izikrini esikhundleni samaphakethe wokuchofoza okukodwa.
I-Turkish Online Yokugembula
Abagembuli baseTurkey abaku-inthanethi kufanele bakhumbule ukuthi ukuzilibazisa kwabo (ngokusemthethweni) akukho emthethweni okwamanje, ngakho-ke kufanele baqaphele lapho bekhetha amakhasino abo aku-inthanethi. Ngenkathi ungenalo uvalo lokungena enkingeni ngemisebenzi yakho, ezinye izingozi ziyaziveza. Uma ubhekene nemakethe emnyama, awusoze wakwazi ukufuna usizo kuziphathimandla ezifanele uma kuvela inkinga. Ngaleso sizathu, ngiphakamisa ukuthi ukhethe amakhasino ahlonishwa kakhulu ku-Intanethi – lawo wonke umuntu awaziyo. UWilliam Hill, i-bet365, neLadbrokes kuyizindlela ezinhle njalo futhi ngamunye wabo unakekela abadlali baseTurkey ngokunikeza isiTurkey njengenketho yolimi, i-Euro njengenketho yemali, kanye nezinketho eziningi zokukhokha ezixhunywe eTurkey.
Ekugcineni, izifundazwe ezahlukahlukene zaseTurkey neKhomishini ye-European Union zizovumelana futhi zenze ngokomthetho isimo sokugembula online eTurkey. Izizwana ezinengqondo zaseTurkey kungenzeka zamukele imodeli yeSchleswig-Holstein yokwenza amakhasino aku-inthanethi abe semthethweni, kepha lokho kushiyelwe intuthuko ezayo. Kuze kube yileso sikhathi, ngeke ukwazi ukudlala kumakhasino aku-inthanethi akuTurkey abanjwe emhlabathini wakho, kepha uzoba nezinketho eziningi zokudlala umdlalo usebenzisa izakhiwo zamakhasino zomhlaba wonke ezinakekela izidingo zakho zemidlalo. Uma wenza kanjalo, ngethemba ukuthi imininingwane engenhla kufanele ikusize ukhethe ikhasino efanele yokubeka ukubheja kwakho.
0.1 Uhlu lwezindawo eziphezulu ze-10 Turkish Online ze-Casino Sites
2.1 Imithetho Yezokugembula yase-Turkish
2.2 Izindawo ze-Casino zase-Turkish Online
2.3 I-Sofortuberweisung Online Casino
2.5 Click2Pay Turkish Indlela Yokufaka Idiphozi Ku-Deutsch Casino Online
2.6 ClickandBuy LLC Izibopho zesiTurkey
2.7 I-NETeller ne-Moneybookers
2.8 I-Turkish Online Yokugembula